5 Talooyin ee Ugu Sareeya Sahanka Weyn | Martech Zone
Waxaa jira run fudud oo ay soo bandhigtay xilligii Internetka: Adkeynta jawaab celinta iyo helitaanka aragti ku saabsan macaamiishaada iyo suuqa bartilmaameedka waa sahlan tahay. Tani waxay noqon kartaa xaqiiqo cajiib ah ama mid cabsi gelinaysa, waxay kuxirantahay qofka aad tahay iyo waxaad raadineyso jawaab celin, laakiin hadaad kujirto suuqa si aad ulaxiriirto salkaaga si aad uhesho fekerkooda daacada ah, waxaad leedahay tan ikhtiyaarrada bilaashka ah iyo kuwa qiimaha leh ee la sameeyo. Waxa jira tiro siyaabo ah oo aad tan ku samayn karto, laakiin waan ka shaqeeyaa SurveyMonkey, markaa aagtayda khibrad ahaaneed waa, dabiici ahaan, abuurista sahanno onlayn ah oo bixiya natiijooyin cad oo la isku halleyn karo.
Waxaan qaadeynaa hadafkeena si aan kaaga caawino inaad sameyso go'aamada ugu fiican ee suurtogalka ah, haddii aad isku dayeyso inaad go'aansato sawirka aad u adeegsanayso daboolka, hagaajinta wax soo saarka ee mudnaanta la siinayo, ama rabitaanka cuntada ee loogu adeegayo xafladda bilowgaaga. Laakiin maxaa dhacaya haddii aadan waligaa sameyn sahan internetka ah, ama aad ku jahwareerto dhammaan sifooyinka qurxinta (ka bood caqliga? Taasi ma tahay nooc laba jibbaar ah ??)
Waxaan keydin doonaa waxyaabaha isku dhafan ee astaamaha sahankeenna waqti kale (in kastoo aan si ammaan ah kuugu sheegi karo, Ka bood caqliga wax xiriir ah kuma laha xadhkaha boodboodka). Laakiin waxaan idinla wadaagi doonaa kuwan 5-ta tilmaam ee gudaha si aad u abuurto sahan internet oo weyn.
1. Si cad u qeex Ujeedada Sahankaaga internetka
Ma bilaabi doontid olole xayeysiis ah adigoon caddeyn ujeedooyinka ololaha (kordhinta wacyiga sumadda, wadidda beddelaadda, xaqiraadda kuwa kula tartamaya, iwm), ma doonaysaa? Hadafyada aan caddayn waxay keenaan natiijooyin aan caddayn, ujeeddada oo dhan ee loo diro sahan internetka waa in la helo natiijooyin si fudud loo fahmi karo waxna looga qaban karo. Sahannada wanaagsan waxay leeyihiin hal ama laba ujeeddo oo diiradda la saaray oo si fudud loo fahmi karo loona sharxi karo kuwa kale (haddii aad si fudud ugu sharxi lahayd 8th grader, waxaad ku socotaa wadada saxda ah). Waqti ku qaad hore si aad u aqoonsato, qoraal ahaan:
Maxaad u abuureysaa sahankan (waa maxay hadafkaagu)?
Maxaad rajaynaysaa in sahankani kaa caawin doono inaad dhammayso?
Maxay yihiin go'aamada aad rajaynayso inay saameyn ku yeeshaan natiijooyinka ka soo baxa sahankan, maxayna yihiin cabbiraadaha xogta muhiimka ah ee aad u baahan tahay inaad halkaas ku tagto?
Waxay u egtahay wax muuqda, laakiin waxaan aragnay sahanno badan oo daqiiqado yar oo qorshayn ah ay ku kala duwanaan lahayd helitaanka jawaabo tayo leh (jawaabo waxtar leh oo wax qabad leh) ama xog aan la fasiran karin. Qaadashada dhowr daqiiqo oo dheeri ah dhamaadka hore ee sahamintaada waxay kaa caawin doontaa inaad hubiso inaad weydiineyso su'aalaha saxda ah si aad ula kulanto ujeeddada oo aad u soo saartid xog waxtar leh (waxayna kuu badbaadin doontaa tan iyo waqti madax xanuun ah dhinaca dambe ee dambe).
2. Ka dhig Sahanka mid Gaaban oo Feejignaan ah
Sida noocyada badan ee isgaarsiinta, sahankaaga khadka tooska ah ayaa ugufiican marka gaaban, macaan, iyo barta. Gaaban iyo feejignaan ayaa ka caawisa tayada iyo tirada jawaabta labadaba. Guud ahaan way kafiican tahay inaad diirada saarto hal ujeedo halkii aad isku dayi lahayd inaad sameysid sahan master ah oo daboolaya ujeedooyin badan.
Baadhitaannada gaagaaban guud ahaan waxay leeyihiin heerar jawaab celin oo sarreeya iyo ka tegis yarida ka-jawaab bixiyaasha sahanka. Waa dabeecadda aadanaha in la doonayo in waxyaabaha dhaqso iyo fudeyd u yeeshaan - mar haddii sahan qaade uu lumiyo xiisaha ay si fudud uga tagayaan hawsha - adiga ayaa kuu daayaya howsha qasan ee tarjumida xogta qayb ahaan (ama go'aansiga in la wada tuuro)
Hubso in mid kasta oo ka mid ah su'aalahaagu ay diiradda saarayaan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen la kulanka ujeeddada aad sheegtay (Ma lihid? Ku noqo tallaabada 1aad). Ha ku tuurin su'aalaha 'fiican inaad haysato' ee aan si toos ah u bixinaynin xogta kaa caawineysa inaad ujeedooyinkaaga gaarto.
Si loo hubiyo in sahankaagu uu yahay mid si macquul ah u gaaban, waqti dad kooban inta ay qaadanayaan. Cilmi baarista SurveyMonkey (oo ay weheliyaan Gallup iyo kuwa kale) ayaa muujisay in sahanku waa inuu qaataa 5 daqiiqo ama ka yar in la dhammaystiro. 6 - 10 daqiiqo waa la aqbali karaa laakiin waxaan aragnaa sicirro dayac fara badan oo dhacaya 11 daqiiqo kadib.
3. Su'aalaha ka dhig mid fudud
Hubso in su'aalahaagu ay gaaraan barta oo ay ka fogaadaan isticmaalka jargon-gaar u ah warshadaha. Waxaan badanaaba helnay sahanno ay weheliyaan su'aalaha khadadka: “Goorma ayay ahayd markii ugu dambeysay ee aad isticmaasho kuwayaga (ku dheji warshadaha farsamada mumbo jumbo halkan)? "
Ha u maleynin in dadka sahaminta kaa qaadayaa ay ku qanacsan yihiin astaamahaaga iyo lingo sidaad adigu tahay oo kale. U higgaad iyaga (xusuusnow taas 8th fasalka waxaad ku waday ujeeddooyinkaagii? Xalilo jawaab celinteeda - dhab ah ama mala awaal ah - tillaabadan sidoo kale).
Isku day inaad su'aalahaaga ka dhigto kuwo gaar ah oo toos ah intii suurtagal ah. Isbarbar dhig: Maxay khibradaada la shaqeyneysay kooxdayada HR? Ku: Sidee ayaad ugu qanacsan tahay waqtiga jawaabta ee kooxdeena HR?
4. Isticmaal Su'aalaha Dhamaadka Xiran Markasta oo Suurtagal ah
Su'aalaha sahaminta ee dhammaaday waxay jawaabeyaasha siinayaan xulashooyin gaar ah (tusaale, Haa ama Maya), taasoo ka dhigaysa falanqayntaada mid aad u fudud. Su'aalaha la xiray dhammaadkoodu wuxuu qaadan karaa qaab haa / maya, xulasho badan, ama cabir qiimeyn ah. Furan su'aalaha sahanku waxay dadka u oggolaadaan inay uga jawaabaan su'aal afkooda ku jira. Su'aalaha dhammaadku aad ayey u fiican yihiin in lagu kabo xogtaada waxaana laga yaabaa inay bixiyaan macluumaad tayo sare leh iyo aragtiyo. Laakiin ujeedooyinka uruurinta iyo falanqaynta, su'aalaha la xiray dhammaantood waa adag tahay in laga adkaado.
5. Ku hay Su'aalaha Qiyaasta Qiimaynta mid joogto ah iyadoo loo marayo Sahanka
Miisaannada qiimeynta ayaa ah hab fiican oo lagu cabbiro loona isbarbardhigo xirmooyinka doorsoomayaasha. Haddii aad dooratid inaad isticmaasho miisaanka qiimeynta (tusaale laga soo bilaabo 1 - 5) hubi inaad ka dhigaysid mid joogto ah inta daraasaddu socoto. U adeegso isla dhibcaha miisaanka (ama ka sii wanaagsan, isticmaal ereyo sharraxaad ah), oo hubi in macnayaasha joogitaan sare iyo hoose ay iswaafaqsan yihiin inta lagu jiro sahanka. Sidoo kale, waxay kaa caawineysaa inaad u adeegsato lambar aan caadi aheyn miisaankaaga qiimeynta si aad uga dhigto falanqaynta xogta mid sahlan. U wareejinta miisaankaaga qiimeynta hareeraha ayaa jahwareerin doonta kuwa sahaminta sameeya, taas oo u horseedi doonta jawaabo aan aamin ahayn.
Taasi waa tan ugu sarreysa 5 talooyin ee loogu talagalay weynaanta sahaminta, laakiin waxaa jira tan waxyaabo kale oo muhiim ah oo maskaxda lagu hayo marka la abuurayo sahankaaga internetka. Halkan dib u hubi talooyin dheeraad ah, ama ka hubi bartayada 'SurveyMonkey'!
Tags: su'aal sahamin ku dhowsu'aal sahamin furanQiyaasta qiimeyntaka bood caqligaNaqshadaynta sahankadhererka sahankaujeedada sahankasu'aalaha sahankatalooyinka sahankaSurveyMonkeysahanzoomerang
“Hubso in mid kasta oo ka mid ah su’aalahaagu ay diiradda saarayaan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen la kulanka ujeeddadaada”
Qodob weyn. Uma baahnid inaad waqtiga dadka ku lumiso su'aalo aan muhiim ahayn. Waqtiga macaamilku waa mid qiimo leh, ha ku lumin su'aalaha qalafsan!